I-'gogo 'yinkqubo ye-AI egcwalisa ukuzenzekelayo kwe-avatar-avatar bio-robot: uMartin Vrijland
ahanjiswe UKUQALA	by UMartin Vrijland	ngo-11 Julayi 2019	• 13 Amazwana
Ubani isihloko esilandelayo ngabantu abathandekayo (I-NPCs) kungenzeka ukuthi kakade yaqonda ukuthi igama elithi "ukuqonda" noma "umphefumulo" lingalinganiswa noxhumano olungenantambo phakathi kwesikhombikubona sebuchopho nesimo se-avatar esilinganisweni. I-avatar ekulandiseni, njengokungathi, ilawulwa ngaphandle futhi ngenxa yalokho iphefumulelwe. Kulesi sihloko ngikhulume ngokufushane ngohlelo lwe-AI olwenza ubuchopho be-avatar. Kulesi sihloko ngifuna ukuchaza kabanzi ngalokho. Isihloko empeleni sinikeza umbono wami ngalokhu: I-'gogo 'yinkqubo ye-AI egcwalisa ngokuzenzakalelayo kwe-avatar-avatar bio-robot. Ake ngichaze lokho ngezansi.
Uma sicabanga ukuthi imizimba yethu yomuntu (kufaka phakathi ubuchopho) yi-avatars ngokulinganisa, khona-ke kukhona umugqa endaweni ethile nomdlali wokuqala; lokho esikubiza ngokuthi ugqozi. Esihlokweni esixhunyanisiwe ngachaze nokuthi kukhona ama-avatars amahle (NPCs) ahambahamba. Ngakho-ke yizi-avatars ezingaqhutshwa ngaphandle. Kodwa labo bantu bangakwazi ukubhekana nanoma yiluphi uhlobo lomzwelo, ukufeza izinqubo zokucabanga eziphakeme (ukufunda, ukwenza umsebenzi, njll) nokukwazi ukujabulela ubuciko nomculo. Kulesi sihloko ngibuye ngiqhathanise namarobhothi avela ku-Netflix uchungechunge oluthi 'Abantu Abangempela' futhi ngibhekiselwa ku-Transcendence yefilimu. Ukuze kube lula, ake sithi ukuhlakanipha okufakelwayo (AI) kuzofinyelela ezingeni elizayo le-"intelligence" esikhathini esizayo esiseduze. Khona-ke unganika i-robot ubuchopho futhi akekho ozokwazi ukubona umehluko 'nomuntu wangempela' futhi.
Kungase kuhlale kunzima kumfundi ojwayelekile ukubona ukuthi siphila ekufaniseni, ngoba konke esikuthintayo, ukubona, ukuhogela, ukuzwa nokunambitheka kuyinto efana nempilo. Lokho ukungaqondi kahle okukhulu. Uma usondeza nge-micro microscope esihlalweni ohlala kuso noma etafuleni ngemuva kokufunda kwakho, ugcina ngezikhala ezinkulu ezingenalutho phakathi kwezakhi zomuntu ngamunye zama-molecule nama-athomu abakhayo. Futhi uma wenza ucwaningo lwe-quantum physics (i-double slits test), kubonakala sengathi indaba ikhona kuphela uma kukhona umbukeli. Lokhu kukukhumbuza izibuko ze-VR, lapho umhlaba ngemuva kwakho engekho, uma nje ungaphenduli ikhanda lakho lapho. Esikhathini sokumlingiswa kwamadlali amaningi, ukubonwa komdlali ngamunye kufanele kuhlanganiswe. Kuwusizo ukucwaninga ngokujulile incazelo yemfundiso ngemuva kokulingiswa, ngokuya entweni 'ukulingiswa' lapha kwiwebhusayithi nokufunda ukuqonda inkolelo ngemuva kwayo.
Njengoba ucabanga ukuthi uthola ukulinganisa, ngakho-ke awusona avatar yakho yomzimba (umzimba wakho ngobuchopho), kodwa ungumdlali wangaphandle obuka futhi udlala lo mbhalo ngokulinganisa kwakho komuntu. Ngakho-ke isikhundla sami siwukuthi kukhona abantu abaningi abahamba phambili abahambahamba abangenalo ukulawula kwangaphandle futhi lapho kungekho muntu obuka ngaphandle / umdlali wangaphandle. Nokho, kuzo zonke izimo, i-avatar yesintu ihlakaniphile ngokuhlakanipha. Lokhu kuhlakanipha okufakelwayo (AI), njengokungathi, kuhlelwe ku-bio-ingqondo yesimo somuntu wesintu. Uhlelo oluyisisekelo seluvele luyi-DNA futhi ludluliselwa ngenqubo yokukhiqiza yama-avatars (inqubo yokuziphindaphinda yokukhulelwa, ukukhulelwa nokuzalwa) ku-avatar elandelayo. Uhlelo lokuqala lolobuchopho lungenxa yezivatho zabazali kanye nenqubo yokuhlela ngokusebenzisa konke okubamba izinzwa ze-avatar. Inqubo yokuhlela isuke ithathwe umphakathi.
Lolu hlelo lokusebenza lobuchopho be-AI lwe-AI luqhubekile kakhulu kangangokuthi kubonakala sengathi yiyona ndlela engcono yokulalela. Yilokho esikubiza ngokuthi "ego" ku-psychology ethandwayo. Ngithanda ukukubiza ngokuthi uhlelo lwe-AI olulawula i-bio-avatar yethu.
Ngenxa yokuthi sizungezwe ama-avatars abantu abanesimo esiqinile kakhulu nesimangalisayo se-Ago AI futhi sibona impumelelo yalezi zindlela zokuvota njengendlela yokuya phezulu, sithatha ukuthatha inqubo yokuhlela kanye ne-AI ku-biobrain yethu endimeni yokunquma ukufeza izimpilo zethu.
Kodwa-ke, uma sihlale sikhumbula ukuthi loluhlelo lwe-AI luvela kumakhi walesi siminganiso (noma ngabe lolu phiko lwe-intelligence AI lubonakala lufunda okuningi futhi ngaleyo ndlela luba mnene) khona-ke sizofunda ukuhlukanisa phakathi kwezinqumo ngubani owenza i-avatar yethu yesintu ngokusekelwe ohlelweni lwe-AI noma izinqumo ezisekelwe ekuxhumekeni komphefumulo ongenazintambo 'ngeyethu yokuqala'.
Ungaphikisana ngokuthi uhlelo lwe-AI lobuchopho bethu be-avatar-bio lungase lukwazi ukwenza izinqumo ezifanele ngaphakathi kwalokhu okufaniswayo, kodwa-ke ucabanga ukuthi 'isidlali sokuqala' ngeke sihlakaniphe ngokwanele noma angeke ube nokubuka konke. Ake sicabange ukuthi umdlali unokubuka konke okungcono (angakwazi ukuqondisa yonke inkundla yokudlala) ngakho-ke angenza izinqumo ezingcono. Akukuhle yini ukudlula uhlelo lwe-AI yobuchopho bethu be-avatar-bio (nohlelo olukhiyiwe ku-DNA)? Akukuhle yini ukulalela ukuxhumana komphefumulo futhi ukuthembela lokho?
Lokhu kunzima, ngoba uhlelo lwe-AI luyakujabulela ukuthatha abaphathi ngokuphindaphindiwe. Uma iningi labantu elikuzungezile lingavinjelwe futhi ngaleyo ndlela liphila ohlelweni lwayo lwe-AI, uzobe uzimisele ukuzinikela ngokugcwele ohlelweni lwakho lwe-AI. Eqinisweni, uhlelwe kusukela esencane kuya ku- ikakhulukazi uma unalo uxhumano lomphefumulo olungenantambo - hhayi ukulalela lokho kuxhumano. Uzohlelwa ukuthi ulalele izinhlelo zakho ze-bio-brain brain. Uhlelo lwakho lwe-bio-ingqondo ye-AI luqeqeshwe kusukela esemncane futhi wena (i-avatar yakho) uvuzwa noma ujeziswa kule nqubo yokuqeqeshwa. Yilokho uhlelo lwezemfundo olufanele futhi yingakho sibona le nqubo yezemfundo iqala ngesikhathi esanda kukhula.
Ngakho-ke kubalulekile ukuthi uthola kabusha uxhumano lomphefumulo wakho olungenazintambo bese kubalulekile ukuthi uvumele uxhumano lomphefumulo olungenantambo ukuthi lulawulwe. Uhlelo lwe-A lugijima i-bio-avatar yakho yenza ukholwe ukuthi lokhu kulingiswa kubaluleke kakhulu. Qala ukuthola ukuthi udlala ukulinganisa futhi ulalele wakho wokuqala ngokusebenzisa uxhumano lwakho lwe-wireless yakho!
Abantu bangakhuluma kanjani 'ngokuqwashisa' futhi ngesikhathi esifanayo basize ukugcina uhlelo?
Inkampani ye-Neuralink ye-Neuralink ye-neuralink izovela ngokuqondile ku-DARPA (njenge-intanethi kanye nama-smartphone)
Ithiyori yokulinganisa yabafundi abaphambili
Amathegi: ai, avatar, ego, afakiwe, ukuhlakanipha okufakelwayo, uhlelo, ukulingisa, ukuxhumana komphefumulo
11 July 2019 ku-13: 17
I-Echoes noma uGenesise
Noma kunjalo, kukhona indandatho evamile emcabangweni wokuthi kukhona simulator, noma umdali, ngubani onendaba nathi. Ngokufanayo, umqondo wokuba ophakeme kakhulu ohlanganisa indawo yonke efana nomqondo wokuthi unkulunkulu odala izwe - isibonelo, njengoba kuchazwe eNcwadini kaGenesise.
11 July 2019 ku-13: 27
Kulokhu, angicabangi ukuthi umakhi walesi simulation "uyasikhathalela". Bheka isihloko ngaphansi kwesixhumanisi sokugcina esihlokweni.
Ukuthi inkolelo-mbumbulu iqhutshwa ngomqondo othize ihlobene nokuthi abantu bafuna ukwehlisa umngcele ukuze bancelise ubuntu ubuningi be-Luciferian AI: ohlelweni lwegciwane
11 July 2019 ku-13: 29
Ngesinye isikhathi, ukuvunwa kwamandla ngokusebenzisa ukuxhaphaza kuyingqayizivele kulokho esiphila khona manje. Sisahlukunyezwa ngokomoya nje.
11 July 2019 ku-14: 27
I-avatar ye-AI yomuntu manje isimatasa ukwakha ukumbumbuluzwa okusha nama-avatars angenza okufanayo nesimo sethu samanje somuntu:
Uhlelo lwezokuPhathwa koMnyango wezokuPhepha oluPhezulu lwezokuPhepha oluPhezulu oluPhezulu, oluhloswe ukukhombisa ukuqonda komuntu ngesikhathi sezingane ezineminyaka eyi-18. UMansinghka ungomunye wabaphenyi abakhulu kule phrojekthi.
11 July 2019 ku-14: 30
Indlela ephelele yokwenza ukhohlwe ukuxhumana komphefumulo wakho ukwakha ukulinganisa ngaphakathi kokulinganisa.
Futhi uma ungenza isibalo sabantu bakholelwe ukuthi ukuhlangana ne-AI entsha kukukwenza ungafi, ungahlasela isisindo se-stem, ngoba lezo zindlela zokuqala zesazi zizenza zitholakale ku-AI entsha (ngaphakathi kwesistimu yegciwane le-Luciferian AI yamanje)
Bona le ncazelo:
11 July 2019 ku-20: 07
Uhlala udaba olunzima ukuqonda ngokuhlakanipha nangokomqondo lokho abafana abafuna kulo mshini. Ngicabanga ukuthi kukhona ukucinga indlela yokuphila emva kwakho / ukufa ngokulayisha ukuqonda kwakho kumatrix okwakhiwa manje ngabafana abhaliwe. Yebo, bazama ukukopisha inkosi yabo futhi mhlawumbe babalekele uLucifer / ukufa ngokushintshela kwesinye isisindo / ubukhulu. Ngicabanga ukuthi lokhu kuyambalwa ngoba lokho kudalwa ubukhulu bukhona ngomusa wesistimu / uhlaka / imingcele eyenza ukuthi Lucifer / ukufa kwenzeke.
12 July 2019 ku-00: 11
Esikhathini esizayo esiseduze, i-avatar indoda izohlelwa kangcono nakakhulu ngamarobhothi angenayo yimuphi umxhwele womphefumulo onokuqala (njengama-avatars angabantu abaphilayo angase abe nawo), ukuze ama-avatars abasha abanobuhlobo bomphefumulo abe ngcono nakakhulu bafunde ukulalela uhlelo lwabo lwe-AI kanye ne-Luciferian Ai (ogijima lo mboniso) athola ukulawula okuningi:
Yisikhathi sokuthi simise isimiso segciwane lesandulela ngculaza.
12 July 2019 ku-03: 57
Ngicabanga ukuthi lokhu ukufanisa ukulibala (kokukhanya). Lokho esikubona kuyinto yesikhathi esidlule, ngakho-ke ungakwazi ukubikezela kalula ikusasa. Sigcina lokhu ngoba singene ngemvume. Ifilimu ye-matrix yayishisa kakhulu ngezindlela eziningi. Ekugcineni, uNoo angashiya umthamo, kodwa u-ego wakhe kanye nothando lomntombazane wakhe bambuyisela emdlalweni. Ukukhetha okunzima uma ucabanga ukuthi unomkhawulo njengomuntu wamanje. Vumela, ngakho-ke sikhululekile futhi sihlengiwe. Ngicabanga ukuthi nginzima kakhudlwana nalokhu. Into eyodwa iqinisekile, ngeke ngiqale ukungenelela futhi ngize ngifele futhi ngingapheli ngokuphindaphindiwe kuleli zinga.
Ngokuqinisekile singakujabulela ukungathathi hlangothi koqobo futhi ekuqaleni siyazi ukuthi ububi ngumlando.
Kuye kwadingeka sigcine lokhu ukuze sigcine ihlanzekile esikhathini esizayo.
12 July 2019 ku-09: 29
Ifilimu yokuqala ye-matrix ngokuyinhloko ihloselwe ukukhombisa ukuthi i-matrix i-loop engapheli nokuthi kungcono ukungamelani. Lokho nakho kwakungezona uhlobo lomsindisi (Neo, lowo).
Ifilimu egcwele iqiniso nge-twist esenza sikholelwe ukuthi umsindisi udinga futhi. Akudingekile lapho. Futhi i-matriz nayo ayinakunqotshwa. Yisimiso segciwane kanye nendoda enezinwele ezimhlophe (uLusifer, umakhi) naye angabethwa nje.
Into ebaluleke kunazo zonke, noma kunjalo, ukutholakala ukuthi awukwazi ukuhlala ngokulinganisa. Ukuqala kwakho kuhlale kungaphandle futhi kugcina. Ukufaniswa kuyinkinga yokuhlola. Ukufanisa ukulinganisa. Awuwona umzimba wakho avatar.
12 July 2019 ku-09: 31
Ngamafuphi: ifilimu i-matrix kwakudingeka idale inkolelo yokuthi konke kuyathandeka futhi kunzima ukunqoba le nqubo yegciwane. Uhlobo lwe-superhero (i-Neo) oludingekayo kulokho; uJesu Kristu omusha.
Cha, akukho lutho. Ngokushesha uma ukhumbule ukuthi ungubani usuvele ukhona.
12 July 2019 ku-14: 43
Abalandeli be-script bathatha isandulela kulo mphumela, uma silandela umgomo we-transhumanism khona-ke siba yizigqila ezigqamile.
15 July 2019 ku-04: 58
Into enhle! Ngokombono ongokomoya, babiza le nqubo ukuthi ivuse. Ukuxhuma kabusha ngaleyo ngxenye noma izingxenye zakho ezihlala / zihlala kwezinye ubukhulu. I-Self yakho yeqiniso, noma yiliphi igama olifunayo. Kuyinto futhi uhlobo lokukhumbuza ukuthi ungubani. Kukhona nabantu abalala futhi ngemva kokuvuka. Futhi kukhona abantu abangakwazi ukukhuluma ngakho ngoba bacabanga ukuthi baqonda ezinye zezimfundiso kodwa abaqapheli ngempela ekuziphatheni kwabo kweqiniso. Noma ubani ophapheme nje uyaqonda / uyakubona.
Ngiyathanda indlela oyichaza ngayo, cishe ngaphezulu ngokweqile, kodwa kokubili kuyiqiniso. Njengoba ngikubona, abantu abangewona abathintekayo bayingxenye yokusiza abanye ekuvuseni kwabo. Kuyinto enhle kangangokuthi laba bantu abangekho animated benza 'into yabo'. (kuze avuse) Akaziqapheli ngisho ukuthi ayingxenye yohlelo olukhudlwana. Ngicabanga ukuthi abezombusazwe kanye nabantu abasesiteji sezwe empeleni abanalo ulwazi lomdlalo abakuwo. Badlala kuphela indima yabo (engazi lutho). Bangahlala kuphela ngokuvumelana nohlelo. Leli zwe kufanele lifane futhi liyenze lokho okufanele liyenze. Akukho okuzoshintsha. Uma uvuka noma uke wazibonela lokhu, kubalulekile kimi ukubuyisela ukuxhumeka kwakho nokuzibona kwakho kweqiniso nokuphila ukuthi ungubani ngempela. Khona-ke ungasiza futhi abanye ekuvuseni kwabo.
15 July 2019 ku-10: 24
I-spirituality ichaza ngandlela-thile, ngoba ngaleso sikhathi ukuqonda kwezobuchwepheshe kwakungakafiki ukuthi siphila ngokoqobo. Isithombe manje singashintshwa sibe ngokoqobo. Sibheka emzimbeni wethu (ngokusebenzisa le avatar) / sidlala ngalokhu okufaniswayo.
Ukuhlolwa kokubili kwe-slits kubonisa. Indawo yonke isebenza njengekhodi yekhompyutha. Siphila "esimweni esikhulu (i-virus ye-Luciferian).
« I-Deutsche Bank-ukukhishwa kwesibhamu sokuqala kwezomnotho kuqala?
Q Anon, ukuvulwa kwe-Epstein, uxhumano lukaClinton, 'umphakathi weqiniso': kuzobe kunjalo! »
Ukuvakashelwa okuphelele: 13.141.972
Umndeni we-PsyOp we-deepfake 'ghostOp ngokususa yonke inkululeko yakho kanye nesingeniso' samaphoyisa acabangayo '(ingxenye ye-3)
Umndeni we-PsyOp we-deepfake 'ghostOp ngokususa yonke inkululeko yakho kanye nesingeniso' samaphoyisa acabangayo '(ingxenye ye-2)
I-Shoe Lace op Umndeni we-PsyOp we-deepfake 'ghostOp ngokususa yonke inkululeko yakho kanye nesingeniso' samaphoyisa acabangayo '(ingxenye ye-2)
SandinG op Umndeni we-PsyOp we-deepfake 'ghostOp ngokususa yonke inkululeko yakho kanye nesingeniso' samaphoyisa acabangayo '(ingxenye ye-2)
UMartin Vrijland op Umndeni we-PsyOp we-deepfake 'ghostOp ngokususa yonke inkululeko yakho kanye nesingeniso' samaphoyisa acabangayo '(ingxenye ye-2)
Hlaziya op Umndeni we-PsyOp we-deepfake 'ghostOp ngokususa yonke inkululeko yakho kanye nesingeniso' samaphoyisa acabangayo '(ingxenye ye-2)
Joyina abanye ababhalisile abangu-1.656